BREAKING NEWS Waraanni humna addaa Oromiyaa gara tigiraayitti ergamee daandii | Kichuu
Posted on November 18, 2020 by kichuu_admin
#BREAKING NEWS Waraanni humna addaa Oromiyaa gara tigiraayitti ergamee daandii affaariin deemaa ture marsaa jalqabaa ergaman keessaa torban 2n darban keessa namni 260 karaatti haleelamanii ajjeefaman! Reeffi isaanii baayyeen maatiif kennameera!
marsaa 2ffaa Dabalataan waraanni ergame ammas affaaruma keessa utuu hin darbin 817 ol ajjeefaman!
TPLF haxxee hidhuun kutata kutataan waraana sirna nafxanyaa haleeltee baayyee fixxe!ammas fixaa jirti.
Ilmaan oromoo Lola nafxanyaa fi tplf kana keessa hin galinaa jennee Kan iyyaa tureef kunoo kanaafi!achi ciisii urjii lakkaa’i kaa!
Humni Addaa Oromiyaa Mulluu ta’aa jirti.
Humna Addaa Oromiyaa 5000 ta’u karaa Affaariin Tigraay gale irratti miidhaa guddaan qaqqabee jira.hanga kaleessa sa’aatii boodaatti humna kanarraa namoonni 817 tahan ajjeefamuu fi madoo tahuu ragaan komishinii poolisii Oromiyaa irra argame ni agarsiisa. Yeroo ammaa kana Oromiyaanuu rakkina keessa jirti; gara Oromiyaatti deebi’ee “Shanee” loluu qaba mormiin jedhu Kaabinee keessatti kahee murtii eeggataa jira.Komishiner Dachaasaa Bitimaa humna kana utuu sadarkaa Kaabineetti irratti waliif hin galamin ajaja koloneel Abiyi Ahmed qofa fudhatee deemuu isaa gabaafamaa ture.inspector Saamu’el irraa
Sareen bakkuma nyaattee duuti inni oromoon jedhe maammaku sun kunoo Namittii Leencoo Albaatii (baatii)jedhamtu kanarratti mirkanaa’ee jira!
Hidhattootni Gumuz kan Qarshiidhaan uummata Oromoo waraana turte muraasni Qeerroo bilisummaa Oromoon to’atamtee jirti jedha oduun gamasiirraa nu qaqqabde tokko